Izindaba - Umehluko phakathi kwe-Sideboard neBuffet
Umehluko phakathi kwe-Sideboard neBuffet
Ama-Sideboards angafika ngezitayela eziningi futhi enezici eziningi ezahlukahlukene. I-sideboard yanamuhla ivame ukuba bushelelezi futhi ingaba nemilenze emide kancane kunebhodi eseceleni yendabuko.
Lapho efakwa egumbini lokuphumula, amabhodi asemaceleni angasebenza njengesikhungo sokuzijabulisa. Ngenxa yenani labo elikhulu lesitoreji nokuthi amathelevishini amaningi angangena kahle phezulu, amabhodi asemaceleni enza inketho enhle yesikhungo sokuzijabulisa.
Uma ifakwe kufoyila, ibhodi eliseceleni lingasetshenziswa ukwamukela izivakashi ezinendawo yokugcina okhiye, iposi nezinto zokuhlobisa.
I-buffet, efana nebhodi eliseceleni, ifenisha enendawo yokugcina ende, ephansi. AmaBuffets imvamisa iyifenisha ebaluleke kakhulu phakathi kwalokhu okubili. Ama-buffet angaba namakhabethe amakhulu nemilenze emifushane eyenza ihlale phansi phansi.
Ekugcineni, i-buffet nebhodi eliseceleni ngamagama angaguqukayo efenisha efanayo, igama lishintsha kuphela ngokususelwa lapho kubekwe khona ifenisha. Ibhodi eliseceleni elibekwe egumbini lokudlela libizwa ngokuthi yi-buffet, kepha uma selithuthelwe egumbini lokuphumula, kuthiwa yibhodi eliseceleni.
AmaBuffets akhonza njengefenisha yokugcina yesigumbi sakho sokudlela. I-Silverware, amapuleti wokuphaka namalineni kuvame ukugcinwa kuma-buffet. Ama-countertops abo aphansi enza indawo enhle yokuphaka ukudla, ikhofi noma itiye lapho kunezivakashi ngaphezulu.
Isikhathi Iposi: Dec-19-2020